Letter to Parent: 17 Oct 2021 – Mandalay International Science Academy
October 17, 2021 Wai Yan
Greetings from MISA administration team.
As the first term of the 2021-22 academic year is approaching its end, there areacouple of things that we would like to bring to your attention.
There areacouple of holidays in the upcoming days. The school will be closed next week – from October 16 to 24 – in observance of the Thadingyut Lighting Festival. The school will resume on the 26th of October.
Diwali festival is expected to be held around the 5th or 6th of November. The school will be closed on the official gazetted holiday.
Tazaungmone holidays will fall on the 17th to the 22nd of November. The first term of this academic year will end just before the Tazaungmone holidays.
We wish happy and peaceful festivals to all families celebrating these special occasions.
The first term of the 2021-22 academic year will end on the 16th of November 2021. There will be an online assembly in the morning, and classes will be dismissed after the assembly. The detailed information will be shared with students soon.
We are happy to inform you that almost all of our teachers and support staff have been vaccinated against COVID-19. We plan to open some face-to-face classes asablended-learning option when it is safe to operate the schooling on-campus; and we will keep you updated regarding this.
We are happy to announce that MISA is planning to offerafree-of-charge 100-hour weekend language course to the public from the 7th of November to the 7th of February. The course will be offered onafirst-come, first-served basis.
Introduction to IGCSE for the current Year9students
We are looking forward to offering some introductory IGCSE classes to our current Year9students in the second term; particularly in math and sciences. Math classes will be held after school; and science classes will be held during the optional hours. There will also beafew sessions on options available for IGCSE courses; and how to make informed decisions on the IGCSER optional course choice; as this may haveahuge impact on their future career prospects. Year9students will be informed of the details at the due course.
AsaCambridge International school, we are committed to developing some particular attributes in our learners; namely confident, responsible, innovative, engaged and reflective. These attributes can be – and will be – best achieved when parents and teachers work in collaboration.
In order for learners to be more confident in their studies in particular, they need parental support in various ways. One thing we would like to request you, dear parents, is that students need to be independent in their learning process. They need to develop their self-study skills, and they need substantial time to practice this. We would therefore like to request you not to over-help them in their studies. It is the very nature of students to make some mistakes while they are learning to masteraskill; and mistakes are therefore highly expected. Students do not need to produce 100% correct answers at the initial stage; and it is the duty of teachers to take some interventions to accommodate students’ needs based on the type of mistakes they make. If perfect work – which in fact is achieved with the help of the private tutoring and parental help – is always presented to the teachers, their teachers do not have chances to know learners’ mistakes.
Also, students of MISA – regardless of their age or grade – are expected to communicate with their teachers and peers directly for any concern they have, which is also very much helpful to become independent learners.
We therefore request our parents to stepafew steps back, not to involve or be next to their synchronous online learning sessions. Please make them communicate with their teachers directly.
Also, in order not to hinder the teaching and learning process, parents are requested not to talk to your children and teachers during the class time. If you have any particular concern regarding the class, you are always welcome to talk to respective teachers outside the class time. The administration would love to talk with you regarding your concerns, too. Please contact our office to make appointments if you would like to discuss with us.
MISA အုပျခြုပျရေး အဖှဲ့မှ နှုတျခှနျးဆကျသလိုကျပါတယျခငျဗြာ
2021-2022 ပညာသငျနှဈရဲ့ ပထမနှဈဝကျ ကုနျခါနီးပွီ ဖွဈသောကွောငျ့ မိဘမြားသို့ သတိပွုမိစလေိုသော အောကျပါ အခကျြတို့ကို ဝမြှေလိုပါသညျ။
လာမယျ့ရကျမြားတှငျ ကြောငျးအားလပျရ ကြောငျးပိတျရကျအခြို့ရှိပါသညျ။ သီတငျးကြှတျမီးထှနျးပှဲတျောအတှကျ အောကျတိုဘာလ ၁၆ရကျ မှ ၂၄ အထိ လာမညျ့ ရကျသတ်တပတျတှငျ ပိတျပါမညျ။ အောကျတိုဘာ ၂၆ရကျနတှေ့ငျ ကြောငျးပွနျဖှငျ့ပါမညျ။
ဒီပဝါလီပှဲတျောကို နိုဝငျဘာလ ၅ရကျ သို့မဟုတျ ၆ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပရနျ မြှျောမှနျးထားပါသညျ။ အစိုးရမှ တရားဝငျ ထုတျပွနျသော အားလပျရကျတှငျ ကြောငျးပိတျ ပါမညျ။
နိုဝငျဘာလ ၁ရရကျ မှ ၂၂ရကျ နအေ့ထိအတှငျး တနျဆောငျမုနျး အားလပျရကျ ကရြောကျပါလိမျ့မညျ။ တနျဆောငျမုနျးအားလပျရကျ မတိုငျခငျ ဤစာသငျနှဈရဲ့ ပထမနှဈဝကျ ပွီးဆုံးပါမညျ။
ဤအခြိနျအခါသမယမမြာတှငျ ‌ပြျောရှငျ ငွိမျးခမျြးကွပါစကွေောငျး ဆုမှနျတောငျ ဆန်ဒပွုအပျပါသညျ။
နိုဝငျဘာလ ၁၆ရကျနတှေ့ငျ 2021-2022 စာသငျနှဈ၏ ပထမနှဈဝကျ ပွီးဆုံးပါမညျ။ ထိုနေ့ မနကျပိုငျးတှငျ အှနျလိုငျးမှ ကြောငျးသားမြား စုံညီ စုဝေးခွငျး Assembly ရှိမှာ ဖွဈပွီး စုဝေးခွငျး ပွီးလြှငျ အတနျးမြား မရှိပါ။ အခကျြအလကျ အသေးစိတျကို ကြောငျးသားမြားအား မကွာခငျ မြှဝပေေးပါမညျ။
ဆရာမြား နှငျ့ ဝနျထမျးမြား အားလုံးနီးပါး COVID 19 ကာကှယျဆေး ထိုးပွီးသှားပွီ ဖွဈကွောငျး ဝမျးမွောကျစှာ အသိပေးလိုပါသညျ။ လုံခွုံစိတျခရြမညျ့ အခွအေနတေဈရပျ ရောကျသောအခါ အှနျလိုငျး နှငျ့ ကြောငျးတှငျး တှဲဖကျ သငျယူမှု blended learning classes အဖွဈ ဖှငျ့နိုငျရနျ စီစဉျပွငျဆငျလကျြ ရှိပါသညျ။ ထိုအကွောငျးအရာနှငျ့ စပျလဉျြး၍ နောကျဆုံးရ အခွအေနမြေားကို ဆကျလကျပွောပွပေးသှားပါမညျ။
စနေ၊တနင်ျဂနှေ အင်ျဂလိပျစာ သငျတနျး
MISA သညျ စနေ၊တနင်ျဂနှေ နမြေ့ားအတှငျး အခမဲ့ နာရီ ၁၀၀ သငျကွားပေးမညျ့ အင်ျဂလိပျ ဘာသာစကားသငျတနျးကို နိုဝငျဘာ ရရကျမှ ဖဖေျောဝါရီ ရရကျအထိ စီစဉျထားခွငျး ရှိကွောငျး အသိပေးလိုပါသညျ။။ သငျတနျးကို ဦးရာလူ စနဈဖွငျ့ ကြောငျးသားသငျကွားပေးပါမညျ။
လကျရှိ Year9ကြောငျးသားမြားအတှကျ IGCSE ကို မိတျဆကျခွငျး
လကျရှိ Year9ကြောငျးသားမြားအတှကျ ဒုတိယနှဈဝကျမှစတငျကာ IGCSE မိတျဆကျသငျခနျးစာအခြို့ ပူးတှဲသငျကွားပေးနိုငျရနျ ပွငျဆငျလကျြရှိပါသညျ။ ကြောငျးဆငျပွီးခြိနျတှငျ သင်ျခြာအတှကျ ကြောငျးခြိနျပွငျပ ညနပေိုငျးတှငျ သငျကွားပေးမညျဖွဈပွီး သိပ်ပံဘာသာရျမြားအတှကျ မိတျဆကျ သျငခနျးစာအား နလေ့ညျပိုငျး optional class အခြိနျတှငျ ရှိပါလိမျ့မညျ။ IGCSE အတှကျ ဘာသာရပျမြား ရှေးခယျြမှု လမျးညှနျခကျြ အခြို့လညျး ရှိပါမညျ။ IGCSE သညျ သူတို့၏ အနာဂါတျ ရှေးခယျြမှုမြားအပျေါ လှနျစှာ အကြိုးသကျရောကျမှုရှိ သောကွောငျ့ IGCSE ဘာသာရပျရှေးခယျြမှု မညျသို့မညျပုံ စဉျးစားဆုံးဖွတျသငျ့ကွောငျး Year9ကြောငျးသားမြားနှငျ့ စတငျ ဆှေးနှေးပေးသှားပါမညျ။
Cambridge ကြောငျးသားတို့၏ ကိုယျရညျကိုယျသှေး
MISA သညျ Cambridge International School တဈကြောငျး ဖွဈသညျနှငျ့အညီ မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှု၊ တာဝနျယူတတျမှု၊ ဆနျးသဈတီထှငျမှု၊ စစေ့ပျမှု နှငျ့ လေးနကျစှာတှေးချေါတတျမှု စသညျ့ ကြောငျးသားကြောငျးသူတိုငျးအတှကျ Cambridge မှ မြှျောလငျ့လိုလားသော ကိုယျရညျကိုယျသှေးမြား တဈဦးခငျြးစီအလိုကျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတတျစရေနျ အတတျနိုငျဆုံးပွုစုပြိုးထောငျပေးလကျြ ရှိပါသညျ။ ဤကိုယျရညျကိုယျသှေးမြားသညျ မိဘနှငျ့ ဆရာမြား ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျလြှငျ အကောငျးဆုံး တိုးတကျလာ နိုငျလာလိမျ့မညျ ဖွဈသညျ။
ကြောငျးသားကြောငျးသူမြား မိမိကိုယျကို ယုံကွညျမှု ပိုမိုတိုးတကျစရေနျ မိဘမြား၏ နညျးလမျးမြိုးစုံဖွငျ့ ပံ့ပိုးမှု လိုအပျပါသညျ။ကြောငျးသားမြား သငျကွားသငျယူမှု ဖွဈစဉျမှတှငျ မှီခိုမှုကငျးစရေနျအတှကျ ကူညီပေးကွပါရနျ မိဘမြားအား မတ်ေတာရပျခံလိုပါသညျ။ သူတို့၏ ကိုယျပိုငျလလေ့ာမှု စှမျးရညျတိုးတတျဖို့ လိုအပျပွီး ထိုအအဆငျ့ထိ ရောကျသညျအထိလကေ့ငျြ့ဖို့ရနျ အခြိနျ မြားစှာ လိုအပျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူတို့ကို အကူအညီလှနျခွငျး မပွုကွပါရနျ ကြှနျုပျတို့ တောငျးဆိုခငျြပါသညျ။ ကြှမျးကငျြစှာ တတျမွောကျစဖေို့ရနျအတှကျ သူတို့ လကေ့ငျြ့ သငျယူစဉျ အတှငျးမှာအမှား အခြို့ လုပျမိခွငျးသညျ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျ တဈခုသာ ဖွဈပွီး ထိုသို့သော အမှားမြား ရှိမညျကိုလညျး ဆရာမြားဘကျက တှကျဆ မြှျောလငျ့ပွီး ဖွဈပါသညျ။ ကနဦး အစမှာ ကြောငျးသားမြား 100% မှနျကနျသော အဖွမြေားကို ဖွဆေိုနိုငျရနျ မလိုအပျပါ။ သူတို့ရဲ့ အမှား အမြိုးအစားပျေါမူတညျပွီး ကြောငျးသားမြားရဲ့ လိုအပျခကျြကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ ဆရာမြား၏ တာဝနျဖွဈသညျ။
ကြူရှငျမြား မိဘမြား ကူညီ ပံ့ပိုးမှုကွောငျ့ အမှားကငျး ရာနှုနျးပွညျ့မှနျသော အဖွရေထားပွီး
ဆရာမြားသို့ တငျပွခွငျး အလအေ့ထ ကွောငျ့ ကြောငျးသားတို့၏ အမှားမြားကို သူတို့ ဆရာမြားက သိရှိရနျ အခှငျ့အရေး မရှိတော့ပါ။
MISA ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားအနဖွေငျ့ မညျသညျ့ အရှယျပငျ ဖွဈပါစေ သူတို့မှကွုံတှရေ့သော အခကျအခဲ လိုအပျခကျြအတှကျ သူတို့၏ ဆရာမြားထံ တိုကျရိုကျဆကျသှယျပွောဆိုဖို့ လိုအပျပါသညျ။ ဤအခကျြသညျလညျး မှီခိုကငျးစှာ သငျယူသူ ဖွဈလာဖို့ရနျ အလှနျအထောကျအကူ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကလေးမြား ကိုယျတိုငျကိုယျကြ တာဝနျယူတတျကာ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးနိုငျစှမျး ပိုမိုတိုးတကျစရေေးအတှကျ မိဘမြားအနဖွေငျ့ အခြို့ ကိစ်စမြားတှငျ ကလေးမြား ကိုယျတိုငျကိုယျကြ လုပျစပွေီး မိဘတို့ အနဖွေငျ့ ခွလှေမျး အနညျးငယျ နောကျဆုတျဖို့ရနျ၊ မပါဝငျဖို့ရနျ၊ အှနျလိုငျးမှ စာသငျကွားနခြေိနျ တဈပွိုငျတညျး သူတို့နှငျ့ အတူ ဘေးတှငျ နီးကပျစှာ မရှိဖို့ရနျ တောငျးဆိုခငျြပါသညျ။ ကြေးဇူးပွုပွီး သူတို့၏ ဆရာမြားနှငျ့ တိုကျရိုကျ ဆကျသှယျစပေါ။
သငျကွားခွငျး နှငျ့ လလေ့ာခွငျး ပွုလုပျနစေဉျမှာ အတားအဆီးမဖွဈစရေနျအတှကျ ဆရာမြား စာသငျနခြေိနျအတှငျး မိဘမြားအနဖွေငျ့ မိမိတို့၏ ကလေးမြားကို ဆရာမြားကို ဆကျသှယျ စကားမပွောဖို့ရနျ မိဘမြားအား မတ်ေတာရပျခံလိုပါသညျ။ အတနျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး တစုံတရာ စိုးရိမျစရာရှိလြှငျ မေးမွနျးလိုရာ ရှိလငျြ စာသငျခြိနျ ပွငျပတှငျ သကျဆိုငျရာ ဆရာမြားသို့ ဆကျသှယျ ပွောဆိုနိုငျပါသညျ။ မိဘမြားအနနှေငျ့ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးအဖှဲ့နှငျ့လညျး ဆှဆေုံ့ဆှေးနှေးနိုငျပါသညျ။ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျအတှကျ ကြောငျးရုံးခနျးသို့ ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
MISA အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2021-2022 ပညာသင်နှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက် ကုန်ခါနီးပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မိဘများသို့ သတိပြုမိစေလိုသော အောက်ပါ အချက်တို့ကို ဝေမျှလိုပါသည်။
လာမယ့်ရက်များတွင် ကျောင်းအားလပ်ရ ကျောင်းပိတ်ရက်အချို့ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၁၆ရက် မှ ၂၄ အထိ လာမည့် ရက်သတ္တပတ်တွင် ပိတ်ပါမည်။ အောက်တိုဘာ ၂၆ရက်နေ့တွင် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပါမည်။
ဒီပဝါလီပွဲတော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၅ရက် သို့မဟုတ် ၆ရက်နေ့တွင် ကျင်းပရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အစိုးရမှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်သော အားလပ်ရက်တွင် ကျောင်းပိတ် ပါမည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁ရရက် မှ ၂၂ရက် နေ့အထိအတွင်း တန်ဆောင်မုန်း အားလပ်ရက် ကျရောက်ပါလိမ့်မည်။ တန်ဆောင်မုန်းအားလပ်ရက် မတိုင်ခင် ဤစာသင်နှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက် ပြီးဆုံးပါမည်။
ဤအချိန်အခါသမယမမျာတွင် ‌ပျော်ရွင် ငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင် ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့တွင် 2021-2022 စာသင်နှစ်၏ ပထမနှစ်ဝက် ပြီးဆုံးပါမည်။ ထိုနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းမှ ကျောင်းသားများ စုံညီ စုဝေးခြင်း Assembly ရှိမှာ ဖြစ်ပြီး စုဝေးခြင်း ပြီးလျှင် အတန်းများ မရှိပါ။ အချက်အလက် အသေးစိတ်ကို ကျောင်းသားများအား မကြာခင် မျှဝေပေးပါမည်။
ဆရာများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးနီးပါး COVID 19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးပြီးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးလိုပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရမည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ရောက်သောအခါ အွန်လိုင်း နှင့် ကျောင်းတွင်း တွဲဖက် သင်ယူမှု blended learning classes အဖြစ် ဖွင့်နိုင်ရန် စီစဉ်ပြင်ဆင်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နောက်ဆုံးရ အခြေအနေများကို ဆက်လက်ပြောပြပေးသွားပါမည်။
စနေ၊တနင်္ဂနွေ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်း
MISA သည် စနေ၊တနင်္ဂနွေ နေ့များအတွင်း အခမဲ့ နာရီ ၁၀၀ သင်ကြားပေးမည့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားသင်တန်းကို နိုဝင်ဘာ ရရက်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ရရက်အထိ စီစဉ်ထားခြင်း ရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။။ သင်တန်းကို ဦးရာလူ စနစ်ဖြင့် ကျောင်းသားသင်ကြားပေးပါမည်။
လက်ရှိ Year9ကျောင်းသားများအတွက် IGCSE ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
လက်ရှိ Year9ကျောင်းသားများအတွက် ဒုတိယနှစ်ဝက်မှစတင်ကာ IGCSE မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာအချို့ ပူးတွဲသင်ကြားပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆင်ပြီးချိန်တွင် သင်္ချာအတွက် ကျောင်းချိန်ပြင်ပ ညနေပိုင်းတွင် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံဘာသာရ်များအတွက် မိတ်ဆက် သ်ငခန်းစာအား နေ့လည်ပိုင်း optional class အချိန်တွင် ရှိပါလိမ့်မည်။ IGCSE အတွက် ဘာသာရပ်များ ရွေးချယ်မှု လမ်းညွှန်ချက် အချို့လည်း ရှိပါမည်။ IGCSE သည် သူတို့၏ အနာဂါတ် ရွေးချယ်မှုများအပေါ် လွန်စွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ သောကြောင့် IGCSE ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှု မည်သို့မည်ပုံ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း Year9ကျောင်းသားများနှင့် စတင် ဆွေးနွေးပေးသွားပါမည်။
Cambridge ကျောင်းသားတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
MISA သည် Cambridge International School တစ်ကျောင်း ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု၊ တာဝန်ယူတတ်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ စေ့စပ်မှု နှင့် လေးနက်စွာတွေးခေါ်တတ်မှု စသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူတိုင်းအတွက် Cambridge မှ မျှော်လင့်လိုလားသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်စေရန် အတတ်နိုင်ဆုံးပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများသည် မိဘနှင့် ဆရာများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှင် အကောင်းဆုံး တိုးတက်လာ နိုင်လာလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားကျောင်းသူများ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုမိုတိုးတက်စေရန် မိဘများ၏ နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသည်။ကျောင်းသားများ သင်ကြားသင်ယူမှု ဖြစ်စဉ်မှတွင် မှီခိုမှုကင်းစေရန်အတွက် ကူညီပေးကြပါရန် မိဘများအား မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှု စွမ်းရည်တိုးတတ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး ထိုအအဆင့်ထိ ရောက်သည်အထိလေ့ကျင့်ဖို့ရန် အချိန် များစွာ လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို အကူအညီလွန်ခြင်း မပြုကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်စေဖို့ရန်အတွက် သူတို့ လေ့ကျင့် သင်ယူစဉ် အတွင်းမှာအမှား အချို့ လုပ်မိခြင်းသည် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့သော အမှားများ ရှိမည်ကိုလည်း ဆရာများဘက်က တွက်ဆ မျှော်လင့်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦး အစမှာ ကျောင်းသားများ 100% မှန်ကန်သော အဖြေများကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ အမှား အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ကျောင်းသားများရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဆရာများ၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။
ကျူရှင်များ မိဘများ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုကြောင့် အမှားကင်း ရာနှုန်းပြည့်မှန်သော အဖြေရထားပြီး
ဆရာများသို့ တင်ပြခြင်း အလေ့အထ ကြောင့် ကျောင်းသားတို့၏ အမှားများကို သူတို့ ဆရာများက သိရှိရန် အခွင့်အရေး မရှိတော့ပါ။
MISA ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် မည်သည့် အရွယ်ပင် ဖြစ်ပါစေ သူတို့မှကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်အတွက် သူတို့၏ ဆရာများထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤအချက်သည်လည်း မှီခိုကင်းစွာ သင်ယူသူ ဖြစ်လာဖို့ရန် အလွန်အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တာဝန်ယူတတ်ကာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးနိုင်စွမ်း ပိုမိုတိုးတက်စေရေးအတွက် မိဘများအနေဖြင့် အချို့ ကိစ္စများတွင် ကလေးများ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လုပ်စေပြီး မိဘတို့ အနေဖြင့် ခြေလှမ်း အနည်းငယ် နောက်ဆုတ်ဖို့ရန်၊ မပါဝင်ဖို့ရန်၊ အွန်လိုင်းမှ စာသင်ကြားနေချိန် တစ်ပြိုင်တည်း သူတို့နှင့် အတူ ဘေးတွင် နီးကပ်စွာ မရှိဖို့ရန် တောင်းဆိုချင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သူတို့၏ ဆရာများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်စေပါ။
သင်ကြားခြင်း နှင့် လေ့လာခြင်း ပြုလုပ်နေစဉ်မှာ အတားအဆီးမဖြစ်စေရန်အတွက် ဆရာများ စာသင်နေချိန်အတွင်း မိဘများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ကလေးများကို ဆရာများကို ဆက်သွယ် စကားမပြောဖို့ရန် မိဘများအား မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။ အတန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ စိုးရိမ်စရာရှိလျှင် မေးမြန်းလိုရာ ရှိလျင် စာသင်ချိန် ပြင်ပတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာများသို့ ဆက်သွယ် ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ မိဘများအနေနှင့် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်လည်း ဆွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်အတွက် ကျောင်းရုံးခန်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။